भारतलाई ओपनर शिखर धवनको चिन्ता ! | Hamro Khelkud
भारतलाई ओपनर शिखर धवनको चिन्ता !
एजेन्सी – अष्ट्रेलियासँगको पाँच वान डे सिरीज अन्तर्गत भारतले तेस्रो खेल शुक्रबार खेल्दै छ । खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो १:४५ देखी राँचीमा सुरु हुने छ ।
सिरिजमा भारतले २-० को अग्रता लिएको छ । तेस्रो खेल जितेको खण्डमा भारतले दुई खेल अगावै सिरीज ३-० ले जित्ने छ । भारत पनि यहि सोचका साथ मैदान प्रवेश गर्नेछ । सुरुवाती दुई खेल गुमाएको अष्ट्रेलियालाई सिरीज जित्ने आसा कायमै राख्न तेस्रो खेल जित्नै पर्ने रहनेछ । सुरुवाती दुई खेलमा आराम पाएका तीव्र गतिका बलर भुवनेश्वर कुमार टोली फर्किएका छन् । भुवनेश्वर टोलीमा फर्कंदा दोस्रो खेलमा खराब प्रर्दशन गरेका मोहम्मद शामी बेन्चमा बस्ने उच्च संभावना छ ।
यता ओपनर शिखर धवनको खराव प्रर्दशन भारतलाई चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । एसिया कपमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका धवन त्यस यता भने कमजोर प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । अष्ट्रेलियासँगको पहिलो खेलमा डक आउट भएका धवन दोस्रो खेलमा २१ रनमा पेभिलिनए फर्के । पछिल्लो १५ ओडीआई खेलमा धवनले २६.८५ को औसतमा मात्र २ अर्ध शतक सहित ३ सय ७६ रन बनाएका छन् ।
धवनले पछिल्ला १५ खेलमा क्रमश: ४, २९, ३५, ३८, ६, ०, ३२, २३, ७५*, ६६, २८, १३, ६, ० र २१ रन जोडेका छन् । धवनको प्रर्दशन सन्तोषजनक हुन सक्दा उनको स्थानमा केएल राहुललाई स्थान दिनु पर्ने आवज पनि उठ्न थालेको छ । तर विश्वकपसम्म भारतले रोहित शर्मा र धवनको जोडी नफेर्ने पक्का छ। विश्वकप अघि भारतको यो अन्तिम ओडीआई सिरीज पनि हो ।
दोस्रो खेलमा सानदार शतक प्रहार गरेका कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेन्द्रसिंह धोनी,अम्बाटि रायडू भारतका प्रमुख ब्याट्सम्यान हुन् । अष्ट्रेलियाले जित निकाल्न यी चार ब्याट्सम्यानलाई रोक्न आवश्यक छ। अन्यथा एक ब्याट्सम्यान मात्र चलेपनि भारतको जित सहज बन्न सक्छ । बलिङमा कुलदिप यादव, जसप्रित बुमराह, भुवनेश्वर कुमार अष्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यानको लागि टाउको दुखाई बन्न सक्छन् ।
यता टी-२० सिरीज २-० जितेको अष्ट्रेलियाले ओडीआईमा भने कमजोर ब्याटिङ गरेको छ । कप्तान आरोन फिन्चको प्रर्दशनले अष्ट्रेलियालाई लगातार निराश बनाई रहेको छ । अष्ट्रेलियाको जितको लागि फिन्चकै प्रर्दशन सुधार हुन आवश्यक छ । तेस्रो खेलमा जित निकाल्न फिन्चसँगै ग्लेन म्याक्सवेल, शन मार्श, एलेक्स केरी, पिटर हेन्डस्कम्ब, एस्टन टर्नरसँगै शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यान चल्न आवश्यक छ । मार्कस स्टोइनस र उस्मान खवाजाले प्रर्दशन सन्तोषजनक छ ।
दोस्रो खेलमा ४ विकेट लिएका तीब्र गतिका बलर प्याट कमिन्सलाई तेस्रो खेलमा जेसन बेहरेनडोर्फ, झेय रिचड्सन, एन्ड्रयू टाई र नाथन कुल्टन नाइल मध्य एकले साथ दिने छन् । एन्ड्रयू टाईले मौका पाउन सक्ने उच्च संभावना छ ।